Akwụkwọ 3 kacha mma nke Etgar Keret
Akụkọ na -adịghị ahụkebe na -erute uru a na -eche na ọ bụ uru nke akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ edemede dị ka ọrụ nnọchianya nke onye ode akwụkwọ nwere nka. Ọ bụ ya mere okwu Etgar Keret ji bụrụ nke onye dere akụkọ na akụkọ bụ onye hụrụ n'ime ha ka ha ghọta akụkọ kacha elu. Karịrị …
Anụkwala ụra ọzọ, nke PD James dere
Onye ọ bụla na -ede akwụkwọ akụkọ ọ bụla na -ahụ ya n'ụdị ntụrụndụ dị mkpirikpi, ntọhapụ ma ọ bụ ọbụna mkpughe. N'ihi ya, nnukwu onye ode akwụkwọ dịka PD James kwukwara na akụkọ ma ọ bụ akụkọ dị ka oghere nke ijikọ na akara ma ọ bụ ihe egwu. N'ihi na mgbe ...
Ụbọchị egwu. site na ụlọ AM
A na -egosipụta uto nke azụmaahịa ụlọ na akwụkwọ ndekọ aha nke na -akọwa ụdị ọmarịcha na isiokwu nuklia gburugburu ezinụlọ maka ọrụ ọhụrụ ọ bụla. N'ezie, ahụmịhe nke ụlọ, oge ọ bụ nwata na nkuchi na ọkụ nke ezinụlọ ihe ọmụmụ nke ...